RW Saacid oo beesha Caalamka Ka dalbaday Ineey Aqoonsadaan doowlada Soomaaliya
Home Somali News Somali Government RW Saacid oo beesha Caalamka Ka dalbaday Ineey Aqoonsadaan doowlada Soomaaliya
Ra’iisul wasaaraha xukuumada Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, ayaa doowladaha Caalamka ugu baaqay ineey aqoonsadaan doowlada Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha ayaa gaar ahaan doowladaha Carabta iyo Afrika ka dalbaday ineey aqoonsadaan doowladaSoomaaliya oo hada aqoonsi buuxa ka heshay doowlada Mareeykanka oo ah doowlada ugu tunka weyn dunida.
Ra’iisul wasaare Saacid, ayaa sheegay in hadda dalka uu leeyahay doowlad rasmi ah islamarkaasna ku talaabsatay horumaro lataaban karo oo dhanka amaanka ah.
“Aqoonsiga Soomaaliya oo sii bataa waxa uu keenayaa in Soomaaliya ay cagaheeda isku taagto” ayuu yiri RW Saacid.
“Waxaan ugu baaqayaa Caalamka intiisa kale ineey ku daydaan sida quruxda iyo qiimeynta badan ee uu Mareeykanka noo aqoonsaday” ayuu mr Saacid sii daba dhigay hadalkiisa.
Ra’iisul wasaare Saacid, ayaa sidokale EU iyo wadamada Yurub ugu baaqay ineey raacaan wadada Mareeykanka uu qaaday oo ah ineey aqoonsi taam ah siiyaan doowlada Soomaaliya oo hada u muuqata mid heleeysa taageerada Caalamka.
Waxaa xusid mudan in Madaxweyne Xasan Shiikh iyo wafdi uu hogaaminayo ay hadasafaro kujoogaan dalka Mareeykanka, waxaana ay kulamo la qaateen madaxda ugus areeysa dalkaas sida Obama iyo Hilary Clinton, taasina ay keentay in Mareeykanka uu aqoonsi buuxa siiyo doowlada Soomaaliya mudo 21 kadib ah.